↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇) ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ. ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန. Retrieved on ၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈. Archived 2019-03-26 at the Wayback Machine.
ၼႃႈ​လိၵ်ႈၼႆ့ မႄးမႃး​ဝႆႉ ၼင်ႇ​ၵမ်း​လိုၼ်း​သုတ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း​တီႈ 14 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:05